Reuzel - Clay Matte Pomade 4oz | The Myanmar Gentlemen Supplies
Home › Reuzel - Clay Matte Pomade
Reuzel - Clay Matte Pomade
Regular price MMK 22,000
Normal (4oz/113g) - MMK 43,000 MMK Big (12oz/340g) - MMK 109,000 MMK Travel (1.3oz/35g) - MMK 22,000 MMK
--High Hold | Dry Matte Finish | Water-Based Clay--
ဆံပင်ကိုထူသရောင်ဖြစ်စေပြီး၊ ဆံပင်ပြောင်နေတာကိုရှောင်ချင်ကာ၊ သဘာဝဆန်ဆန် ဆံပင်ပုံစံများ၊ အဖွပုံစံများ သွားချင်သူတို့နှင့် ဆံပင်ပါးသူ ညီအစ်ကိုတို့အတွက် ခြောက်ကပ်ခြင်းများမရှိပဲ ချောချောမွေ့မွေ့ ပုံသွင်းစေနိုင်မည့်...
Reuzel - Clay Matte Pomade သည် Holland's Finest Pomade ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမှတ်တံဆိပ် Reuzel - Holland မှထုတ်လုပ်ထားသော အားစိုက်မထုတ်ထားသလို ဆံပင်အရောင်လုံးဝတောက်ပြောင်စေခြင်းမရှိတဲ့ Dry Matte Finish နှင့် Medium to High Hold ထိန်းအားကောင်းကောင်းကိုပေးပါသည်။ ချောချောမွေ့မွေ့ပုံသွင်းနိုင်စေပြီး၊ ဆံပင်ကိုထူထူထဲထဲရှိစေမည့် ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
ဆံပင်ကိုမာသွားစေခြင်းမရှိပဲ အချိန်မရွေးဆံပင်ပြန်ပြင်နိုင်ပြီး၊ Texture အရေးအကြောင်းများ ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရုံသာမ၊ ချွေးဒဏ်၊ အစိုဒဏ်များကို ခံနိုင်မည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များအသုံးပြုနေကြသော ခေါင်းလိမ်းဆီဖြစ်ပါသည်။
ထိန်းအားကောင်းကောင်း Medium to High Hold
ဆံပင်အရောင်လုံးဝတောက်ပြောင်စေခြင်းမရှိ Dry Matte Finish
ဖြီးလိမ်းရချောမွေ့စေမည့် Smooth Application
Vanilla Mint ရနံ့
4oz/113g ဘူး size
Reuzel Clay Matte Pomade is formulated to createatouchable, flexible hold withamatte finish that is perfect for manipulating hair into almost any style. This water-based clay pomade is best used to emphasize texture and separation with the moldable, flexible hold of natural clay. With its all-day long hold, our strong hold matte finish pomade is perfect for styling short hair and its sweat proof formula is ideal for active men!
Non-Hardening and Pliable
Restyable Anytime, Anywhere
Long Lasting Medium to High Hold
Subtle Vanilla Mint Fragrance